Dashboard ကို Xbox One မှာဗီဒီယို
အသစ် consoles စများလွှတ်ပေးရန်စောင့်ရှည်လျားမဟုတ်, ငါတို့သည်ပြီးသား Microsoft ကအထဲက Xbox One မှာနီးပါးအားလုံးရှုထောင့်ကိုငါသိ၏။ သို့သျောယခုသင် console ကို၏ menu ကိုကြည့်ယူနိုင်ပါသည်။ Microsoft ကသာသစ်ဒိုင်ခွက်နှင့် ပတ်သက်.
MSI All-In-One ဂိမ်းကစားခြင်းကိုစတင်မိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်
MSI သည် "တလုံးကို" တစ်ဂိမ်းကိုကွန်ပျူတာအမျိုးအစားကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ဒါကတစ်ခုတည်းမော်နီတာထဲမှာစုဆောင်းကောက်ယူသော configuration ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ထိုင်ဝမ်အနေဖြင့်စက်ကိုနာမတျောအ AG2712 ဖြင့်သမုတ်သော, ဒါပေမယ့် CeBIT 2013 မှာပေးအပ် ပထမတစ်ချက်မှာ:, ကွန်ပျူတာထိတွေ့ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် 1080p နှင့်အထောက်အပံ့တစ်ခု resolution နဲ့ပုံမှန် 27 လက်မမော်နီတာနဲ့တူလှပါတယ်, ဒါပေမဲ့အပေါငျးတို့သပါဝင်ပစ္စည်းများ မျက်နှာပြင်အောက်မှာဝှက်ထားကြသည်။ ဒါဟာ Processor ​​ကို Intel Core-i7 Ivy Bridge နှင့်ဂရပ်ဖစ် accelerator Nvidia GeForce 670MX ၏သာယာသောအံ့သြမျက်မှောက်ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့သူကမှတ်စုစာအုပ်ကွန်ပျူတာများတွင်လည်းအသုံးပြုကြောင်းမိုဘိုင်းကဒ်ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်, ဒါကြောင့်ခေတ်သစ်ဂိမ်းလုံလောက်သောစွမ်းဆောင်ရည်ပေးစွမ်းသည်။ 27 လက်မအရွယ် AG2712 HDMI အပါအဝင်လက်ငင်းတစ်ဗဟုလည်းပါဝင်သည်, VGA, Ethernet, ကို USB 2.
Redmondtsy မရှည်လျားလာမယ့်၌၎င်း, Professional က-OS ကိုခိုးကူးအသစ်တစ်ခုကိုလိုင်စင်အစီအစဉ်မိတ်ဆက်ပေးသည်။ Get စစ်မှန်သော Windows ကိုသဘောတူညီချက်၏စည်းကမ်းချက်များအရ, Windows XP ကို​​ Pro ကို၏လိုင်စင်မဲ့မိတ္တူနှင့်အတူမည်သူမဆိုတစ်ဦးကိုအထူးစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းနှင့်တရားဝင်၏ခိုးကူးဗားရှင်းကိုအစားထိုးနိုင်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်, အကြီးမြတ်ဆုံးအတိုးစာချုပ်အလိုလိုပါပြဋ္ဌာန်းချက်များဖြစ်ကြသည်။ Microsoft ကပြန်လာအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုမှလိုလားဘာလဲ အရေးအပါဆုံးအရာ - ကျနော်တို့ကုမ္ပဏီကနေမှသာစစ်မှန်သော software ကိုအသုံးပြု။ တနည်းအားဖြင့်စာချုပ်လက်မှတ်ထိုး, သင် Microsoft ကသင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားအစီအစဉ်များကို check လုပ်ထားကြောင်းသဘောတူသည်။ ထို့အပြင်တစ်ဦးအပိုဆောင်းကြေးဘို့သင့်ကိုနောက်ပိုင်းတွင်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုနှင့်လက်ခံကုမ္ပဏီရဲ့ထုတ်ကုန်တစ်ခုအဆင့်မြှင့်ထွက်သယ်လိမ့်မည်။ လူထုမှ Get စစ်မှန်သောအားသာချက်သဘောတူညီချက်တွန်းအားပေးရန်သဘောတူသောသူ ဖြေရှင်းချက်ပေးသူ, သစ်လိုင်စင်ပြန့်ပွားနဲ့ဆက်စပ်ကုန်ကျစရိတ်များအတွက်လျော်ကြေးငွေလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ Microsoft ကသူ့ဟာသူကုန်ကျစရိတ်ထုတ်ဖေါ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမိတ္တူကို Windows XP Pro ကို၏အဓိကစီးကနေသီးခြားစီကိုရောင်းချမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်ပါဘူး။ ဒါဟာဤ action & ndash ဖြစ်နိုင်သည်;
တည်ဆောက်ခြင်းငှါကြီး S550 Encore
Reviews ဤသည်နေ့ရက်ကာလကိုစျေးဆိုင်စာသားအများအပြားကွဲပြားခြားနားတဲ့စပီကာမော်ဒယ်များအောက်မှာနှိမ်နင်းနေသောကြောင့်အသစ်တစ်ခုကိုမာလ်တီမီဒီယာ system ကိုဝယ်ယူ, တစ်ကယ့်ပြဿနာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်စက်ပစ္စည်းအသစ်ဝယ်တဲ့အခါရွေးချယ်စရာနှင့်အတူမှားခံရဖို့မဟုတ်, မာလ်တီမီဒီယာအသံပညာ၏ရွေးချယ်မှုသူတို့ရဲ့သီးခြားလိုအပ်ချက်များအပေါ် အခြေခံ.
10 အနည်းဆုံး၎င်း၏ဗားရှင်းသစ်အတွက် Windows operating system ရဲ့စံနှုန်း tools တွေကို screenshots များဖန်တီးခြင်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌ တီထွင် - ကဖွင့်လျှောက်လွှာကို "ကတ်ကြေး," စက္ကန့်အနည်းငယ်၏တစ်ဦးနှောင့်နှေးနှင့်အတူဖန်သားပြင်ရိုက်ချက်များဖန်တီးနိုင်စွမ်းအားကဆက်ပြောသည်။ မျက်နှာပြင်ဖမ်းမိဘို့စနစ်များအားလုံးအခြားနည်းလမ်းအ progenitor ၏သစ်ကို Windows 10 ဗားရှင်းရွှေ့ပြောင်း။ ကျွန်တော်တို့ကိုအောကျတှငျသူတို့ကိုဆနျးစစျကွပါစို့။ PrintScreen keys တွေကိုနှင့် alt + PrintScreen Windows တွင်ပုံလုပ်အသက်အကြီးဆုံးလမ်း - သာတက်ကြွစွာပြတင်းပေါက်ဖယ်ရှားပစ်ရန်တစ်ခုလုံးကို screen နဲ့ပေါင်းစပ် alt + PrintScreen ဖယ်ရှားပစ်ရန် PrintScreen သော့ချက်။ အ clipboard ပုံရိပ်မှာနေရာချပြီးတော့ဂရပ်ဖစ်တ္ထု၏အသွင်းပေးသည့်ပုံရိပ်ကိုအယ်ဒီတာ, ရုံးလျှောက်လွှာ, လျှောက်လွှာမှတ်စုများ, အခြားမည်သည့်အစီအစဉ်သို့ဖြည့်စွက်နိုင်ပါသည်။ လျှောက်လွှာ "ကတ်ကြေး" Windows Vista ကတွင်ပိုမိုထငျရှားသောရည်ရွယ် Application "ကတ်ကြေး", စနစ် 10 ဗားရှင်းအတွက်, ဖော်ပြခဲ့တဲ့အဖြစ်အသစ်တစ်ခု function ကို5စက္ကန့်ဖို့ screenshots များ၏ဖန်ဆင်းခြင်းနှောင့်နှေးဝယ်ယူခဲ့သည်။ န်ထမ်းလုပ်ငန်းဆောင်တာအတွင်း Screenshots "Share" ပုံရိပ်ဟာသူ့ရဲ့နောက်ထပ် OneNote တို့က Web Services ကမှတ်စုဖို့လူမှုရေးကွန်ရက် vKontakte, Facebook, Twitter နှင့် Evernote အတွက် mail ဖြင့်ပေးပို့ခြင်းအတွက်လိုအပ်လျှင် ထိုသို့ hotkey Win + အိပ်ချ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့် system ကို "ဝေစု" အင်္ဂါရပ်အတွင်းကို set up နိုင်ပါတယ် ပုံရိပ်ဒေတာပေးပို့ခြင်းခံရလိမ့်မည်သည့်မှတစ်ဆင့် Metro-app ရဲ့စတင်ခြင်းနှင့်အတူကိုပြင်ဆင်ကြလိမ့်မည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, သင်တန်း, Metro-client ကိုလျှောက်လွှာစနစ်ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားရဦးမည်။ - ဘာဂ်သေနတ်ပစ် - ကွဲပြားခြားနားသောဝဘ်န်ဆောင်မှုအတွက်ဓါတ်ပုံတွေ၏လက်ငင်းထုတ်ဝေ များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်အတူဘက်ပေါင်းစုံဂရပ်ဖစ်အယ်ဒီတာ, လျှောက်လွှာဘို့တ္ထု၏ရွေးချယ်မှု, အတူလည်းအလုပ်လုပ်တဲ့ skrinshotter ။ FastStone Capture ထိုမော်နီတာမျက်နှာပြင်၏ဖမ်းယူခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဂရပ်ဖစ်အယ်ဒီတာရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်နှင့်အတူ Functional skrinshotter ။
ပြဿနာရဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ:စံသုံးပြီး | Windows ကိုစွယ်စုံကျမ်း
သငျသညျအချိန်ရှိသည်နှင့်အရင်းအမြစ်များရရှိနိုင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင် , သငျသညျထိုပြဿနာများ၏အကြောင်းရင်းခွဲထုတ်ရန်နောက်ထပ်သက်သေလမ်းကိုသုံးနိုင်သည်။ ဤနည်းလမ်းကိုတစ်ဦးဟုလူသိများပြုပြင်သောစံနှင့်အတူစနစ်နှိုင်းယှဉ်ပါဝငျသညျ။ မရရှိနိုင်ခဲ့လျှင်နှစ်ဦးတူညီစက်ရှိတယ်, အဲဒီစက်၏ parameters တွေကိုနှိုင်းယှဉ်လျှင်နိုင်ပါသည်။ တဦးတည်းစနစ်ကွန်ယက်ကိုချိတ်ဆက်ရန်ပျက်ကွက်လျှင်, တစ်ဦးလူသိများအလုပ်လုပ်အာဏာကို cable ကိုအတူအလုပ်ခွင်ကရွေ့လျားသင်ကွန်ယက်ကိုပတ်ဝန်းကျင်၏မမှန်ကန်ကြောင်းစစ်ဆင်ရေး၏ပြဿနာကိုထုတ်ပယ်သို့မဟုတ်အတည်ပြုပေးရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ software ကိုပြဿနာတွေဖြေရှင်းရေးအခါ, ဥပမာအား network ကို parameters တွေကိုတစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ, လိုအပ် DNS Server ကိုနှငျ့ server addresses များကိုအဖြစ် subnet mask ကိုအနိုင်ပေးလိမ့်မည်။ ထိုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှအကျွမ်းတဝင်မဖြစ်သည့်ကွန်ယက်အတွက်ပြဿနာတွေဖြေရှင်းပေးဖို့, တူညီတဲ့ကွန်ပျူတာများ၏ parameters မ​​ျားကိုနှိုင်းယှဉ်မကြာခဏကွန်ယက်၏ parameters တွေကို ပတ်သက်.
Microsoft က Windows7ကိုများအတွက်စျေးနှုန်းများထုတ်ဖော်ပြ
(စက်တင်ဘာလအတွက်ထွက်မှုကြောင့်ဖြစ်သည့်) ပြိုင်ဘက် Apple က OS X မှာ Snow Leopard များအတွက် $ 29 ၏အပူ feeling, အများစုမှာဖွယ်ရှိ Microsoft ကလူကြိုက်အများဆုံး operating system ကို edition မှာ၏စျေးနှုန်းဖြတ် - Home Premium & ndash;